Fampielezana haran-dranomasina mifototra amin'ny larva | Reef Resilience
Ny famerenam-pahaizana sy ny famerenana ny vatohara vaovao misy karazany maro dia ilaina amin'ny famerenana indray ny isan'ny mponina. Raha toa ka ambany ny isan'ny vatohara dia mety hanakana ny fihenan'ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina na dia misy hetsika fitantanana hafa aza ny famerenana voafetra. Ity fizarana ity dia mamaritra ireo fepetra tafiditra amin'ny famerenana indray ny mponina amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fomba fampielezana mihanaka amin'ny fampiasana ny fizotry ny fanenoman-tena.
Na dia imbetsaka isan-taona monja aza no misy ny fanatodizan'ny haran-dranomasina, dia afaka manome zaza haran-dranomasina an-tapitrisany ireo fisehoan-javatra ireo — ny tsirairay amin'izy ireo dia maneho olona iray vaovao. Ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fampiasana larva amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara dia ny fahafahana:
Ampitomboy be ny ezaka fanarenana amin'ny fampitomboana ny isan'ny haran-dranomasina
Miaraha miasa amin'ny karazana haran-dranomasina isan-karazany, ao anatin'izany ny haran-tsampana sy ny vatohara
Ampitomboy ny fahasamihafan'ny fototarazo amin'ny haran-dranomasina, ahafahan'izy ireo mampifanaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Famoràna ireo gorodon'ny koropika avy amin'ny vatohara Acropora. Sary © Barry Brown / SECORE International
Dingana fanaparitahana larva
Ny toro-hevitra amin'ny faminaniany ny fanatodizan'ny haran-dranomasina dia azo jerena ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKarazan-tsakafo Karaiba ary ny tabilao momba ny faminaniana etsy ambany novolavolain'ny Coral Restauration Consortium's misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampielezan-kevitr'i Larval Propagation.
Ao amin'ny dingana fampiraisana, ny gametes haran-dranomasina nangonina avy amin'ny zanatany samy hafa ray aman-dreny dia atambatra ary ahetsiketsika moramora mba hampiroboroboana ny fihaonana. Mahavelona mandritra ny ora maromaro aorian'ny fanatodizana ny gametes coral. Noho izany, zava-dehibe ny fampandehanana ny dingana fampiraisana ny olitra raha vao azo atao, izay ahitana gametes avy amin'ny ray aman-dreny samy hafa. Ho fanampin'ny fotoana, ny fifantohana amin'ny gametes dia lafin-javatra iray hafa tokony hodinihina.
Jereo ny lahatsary avy amin'ny SECORE International: SECORE - Rehefa mifampihaona ny sifotra
Ny embryon amin'ny dingana voalohany dia hita eo amin'ny adiny efatra eo ho eo aorian'ny fampiraisana amin'ny alàlan'ny mikraoskaopy. Rehefa afaka andro vitsivitsy ny fivoarana, ny embryon coral dia mamorona olitra milomano malalaka. Misy fomba isan-karazany azo ampiasaina amin'ny fambolena sy fiompiana olitra haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny dingana fampandrosoana mandra-pahafahan'izy ireo hipetraka. Ny iray amin'ireo fomba ireo dia hahomby kokoa raha manomboka amin'ny tahan'ny fampiraisana avo lenta ianao. Amin'ny ankapobeny, ny paikady dia ny mitazona ny olitra ao amin'ny tontolo mifanaraka amin'ny mari-pana sy ny kalitaon'ny rano.
Ny tahan'ny fivoarana, ary noho izany ny fotoana mandra-pahavonon'ny olitra hipetraka, dia miankina amin'ny karazana haran-dranomasina sy ny mari-pana, satria mihamitombo haingana ny olitra miaraka amin'ny hafanan'ny rano mafana. Araka izany dia aroso ny fanaraha-maso tsy tapaka mandritra io dingana io.
Jereo ny lahatsary avy amin'ny SECORE International: Video SECORE - Coral Larvae mitarika fitsangatsanganana ao amin'ny University of Guam
Rehefa avy milomano ao anaty ranomasimbe misokatra, ny olitra haran-dranomasina dia mila mitady substrate mety amin'ny haran-dranomasina mba hipetrahana sy hiharan'ny metamorphose ho lasa polyp voalohany. Mampiasa famantarana be pitsiny maro ny olitra haran-dranomasina, anisan'izany ny hazavana, ny feo, ny firafitry ny tany, ary ny zavatra simika hisafidianana ny toerana hipetrahany sy hiainany eo amin'ny vatohara.
Mba hamerenana amin'ny laoniny amin'ny alalan'ny fampitomboana olitra, dia matetika atao amin'ny fomba roa ny famporisihana ny fametrahana ny olitra voambolana: mivantana eo amin'ny harambato na eo amin'ny substrate artifisialy izay hambolena any aoriana.
Fambolena vato harana
Ny tanjona farany ho an'ny haran-dranomasina vao tafapetraka dia ny hitondran'izy ireo anjara amin'ny tontolon'ny haran-dranomasina sy hampiroborobo ny fanarenana ny haran-dranomasina. Tafiditra amin'izany ny fambolen-kazo ireo haran-dranomasina vaovao ireo ho any amin'ny vatohara. Raha mipetraka amin'ny substrate artifisialy, dia atao aorian'ny fotoana fohy ny fitomboana ao amin'ny tontolo arovana, toy ny toeram-pambolena eny an-tsaha na eny amin'ny tany.
Jereo ny lahatsary avy amin'ny SECORE International: Horonan-tsary SECORE - Manamboatra ny harambato
Fanamarinana ireo vondrona famafazana miaraka amin'ireo haran-dranomasina izay notehirizina tao amin'ny toeram-pambolena an-dranomasina alohan'ny fambolena. Sary © SECORE International/Reef Patrol
Io votoaty io dia novolavolain'ny SECORE International. Ho fampahalalana bebe kokoa, mifandray misokatra amin'ny varavarankely vaovaoinfo@secore.orgmamorona mailaka vaovao na mitsidika ny tranokalany amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaosecore.org.
Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny Lesona 4: Fampielezan'ny haran-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDiniho ny lesona 4
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVondrona miasa amin'ny fampitomboana ny larva ny Coral Restoration Consortium
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikarohana momba ny Coral Spawning sy ny tranokala fampielezan-kevitra Larval